Ungaziphatha kanjani uma kwenzeka i-waterpout enamandla | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu iqala ukuba nemiphumela emibi ezindaweni eziningi zeplanethi. Endabeni yeSpain, inyanga kaJulayi ibe ngomunye wabashisa kakhulu emlandweni kanye ne- inyanga kaSepthemba Sekuqale kanzima njengoba kunezivunguvungu, isichotho nezindawo zamanzi.
Esimweni lezikhukhula lemifula yamanzi, kufanele uqaphele kakhulu futhi ulandele uchungechunge lwezeluleko ukugwema imiphumela ebulalayo.
Into ebaluleke kakhulu okufanele uyenze uma ubhajwe kukazamcolo, ukuhlala uzolile futhi ungalokothi ulahlekelwe izinzwa. Akunasimo zama uwele umgwaqo ogcwele amanzi selokhu amanzi ehamba ngejubane elikhulu futhi awazi ukuthi yiziphi izithiyo ezingaba khona ezansi kwalo. Uma kwenzeka ukuthi i-waterpout ikumangaze futhi yaqala ukuhudula imoto yakho, Kumele uphume emotweni noma kunjalo.
Amandla wamanzi ne-waterpout angadala imoto yakho iyacwila nawe ngaphakathi Ukuphuma emotweni, zama ukukwenza kuqala Ngomnyango uma kwenzeka ukuphakama kwamanzi kukuvumela ukuthi ukwenze. Kubalulekile ukuthi ukhumbule, ukuthi kufanele ukwenze ngamasango ezingakolunye uhlangothi lwendlela yamanje. Uma kungenzeki, enye inketho ukuphuma ngefasitela lemoto. Uma ungakwazi ukuyivula, yiphule ngezinye uhlobo lwento ebukhali unakekele ukuthi ungakulimazi.
Inketho yesithathu ukushiya ngefasitela langaphambili lomoya, ukwenza lokhu, phusha kanzima ngemilenze yomibili kuze kuphuke ingilazi ngokuphelele. Njengethiphu lokugcina okufanele ungalikhohlwa, khumbula ukuhlala uzolile futhi ukuthula ngaphezu kwakho konke, phuma ngakolunye uhlangothi lwamanje futhi usheshe uthathe isinyathelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Ungaziphatha kanjani uma kwenzeka kuqhuma amanzi